Coral Reef: အကယ်၍များ…
ညိုလေးနေ said on January 8, 2015 at 4:44 PM
အတိတ်အကြောင်းတွေ ပြန်တွေးပြီး စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ကွယ်၊ အသားညို ညို၊ ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ တသက်တာအတွက် အချစ်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲ။
အရပ်မမြင့်တာလေးတော့ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ သည်းခံပေးနော် :D
Ma Tint said on January 8, 2015 at 9:08 PM
မိန်းကလေးကျောင်းတိုင်း မလွတ်တဲ့ကဏ္ဍမို့ ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာပါ ဇွန်လေးရေ... တီတင့် တက်ခဲ့တဲ့ အ.ထ.က (၃)ဒဂုံမှာလည်း ကြုံခဲ့ဘူးပါ့ :)
ညီလင်းသစ် said on January 9, 2015 at 6:30 AM
" - ချိုပြုံးရွှင် "...၊ မ ရဲ့နာမည်က အပျံစားပဲ...၊းP
ဘာကိုမှ များများစားစား သိမထားတဲ့ မိန်းကလေး ကျောင်းတွေရဲ့ အကြောင်းကို တအံ့တသြနဲ့ တစွန်းတစ သိခွင့်ရတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပို့စ်လေးပါပဲ ညီမလေးဇွန်။
shin said on January 9, 2015 at 10:34 AM
ကိုယ်လဲ လသာ(၂)ကပါ။ ကိုယ့်မှာ အချစ်တော်မထားခဲ့ဖူးပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်တော်ကောင်မလေး အကြောင်းပြောပြချင်လာလို့ပါ။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက တနေ့သူ့ အချစ်တော်ကိုပေးတဲ့စာမှာ လက်ထိပ်ကိုဖောက်ပြီး ထွက်လာတဲ့သွေးနဲ့ စာရေးတာ။ ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်မှာ အတော်လန့်သွားခဲ့ဖူးတယ်။ (အခုတော့ အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းလဲ ယောက်ကျားရပြီး ကလေး အမေတောင်ဖြစ်နေပြီ။ ) အဲ့တုန်းက အကြောင်းတွေ အခု ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အတော်ရီစရာတွေ ဖြစ်လို့။
ဇွန်မိုးစက် said on January 9, 2015 at 4:05 PM
ဟိ… ပါးချိုင့်ရှိတာ တစ်ခါမှတောင် သတိ မထားမိဘူး။ ညို ဖွင့်ပြောမှ သိရတယ်ကွယ်။ :P
တီတင့်လည်း မိန်းကလေးကျောင်းထွက်ပဲကိုး။ ဒီလိုဆို အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရှယ်ပါဦးလား တီတင့်ရဲ့။ :D
အဲ… အကိုညီလင်းပြောမှ သတိထားမိလိုက်တယ်၊ ချိုပြုံးရွှင် မဟုတ်ဘူးရယ်။ တကယ်ဆို သီချင်း chorus အပိုဒ်ရဲ့ အစလို့ဖြစ်ရမှာ။ ဇွန်ရေးတာကျန်သွားလို့… အဟီး။ :D
ဟိုတုန်းက ယောက်ျားလေးတွေ အရှုံးပေးရအောင် သဲခဲ့ကြ၊ ကဲခဲ့ကြတာ ခုချိန်မှာ ပြန်တွေးမိတော့ ရယ်စရာဖြစ်နေတာ အမှန်ပဲ Shin ရေ။ မနဲ့စိုးလည်း သမီးတစ်ယောက် အမေ ကိုယ်စီဖြစ်နေပါပြီ။း)
ညီလင်းသစ် said on January 9, 2015 at 10:18 PM
သိသားပဲ...၊ ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင် ပိုပြီး common ဖြစ်တဲ့ " မြနန္ဒာ " ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုတာ...၊ ဒါပေမယ့် ဇွန့်ရဲ့ စာအမှားကို နည်းနည်း ကပ်တီးကပ်ဖဲ့ လုပ်ချင်တာနဲ့...။းD
ဇွန်မိုးစက် said on January 10, 2015 at 8:48 PM
ကတ်သီးကတ်ဖဲ့ လို့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းမှာ ရေးထားတယ် အကိုရ။ :P
Adora etc. said on January 14, 2015 at 1:29 PM
လသာ၂ထွက်မို့လို့လား မသိဘူး။ စဖတ်ကတည်းက လသာ၂ကအချစ်တော်ဇာတ်လမ်းမှန်းသိတယ်။ ဟီးဟီး
ကျောင်းကအဖြစ်အပျက်လေးတွေ သတိရသွားအောင်ရေးတတ်တာမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇွန်မိုးစက် said on January 14, 2015 at 10:37 PM
လာဖတ်ပြီး မန့်သွားတဲ့ ညီမ Adora ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လသာ၂ ကျောင်းသူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ တဂ်လည်းတဂ်ချင်ပါတယ်။ အမှတ်တရလေးတွေရှိရင် ရေးပေးပါဦးလို့။း)
Anonymous said on January 19, 2015 at 10:39 AM
မဇွန်ရေ ဟိုးအခေါက် မလေးရေးထားတဲ့ လသာ၂ဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ပြီးကတည်းက ရေးထားတဲ့ လက်စတခုရှိတယ်။ အဲဒါကို ပြန်ဆက်ရေးနေတယ်။ နည်းနည်းစောင့်နော်။ မနေ့က ဆရာကန်တော့ပွဲပုံတွေ ဖဘမှာ ကြည့်ရလား။ လသာ၂ page ထဲမှာ ဆရာမပုံတွေအများကြီးပဲ
ဇွန်မိုးစက် said on January 19, 2015 at 12:58 PM
ညီမ Adora က ဆက်ရေးပေးမယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာတယ်။ မဇွန် မနေ့က ဆရာကန်တော့ပွဲ ရောက်ခဲ့တယ်။ ဆရာမတွေနဲ့လည်း ပြန်တွေ့ရ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း ပြန်တွေ့ရတော့ အရမ်းပျော်စရာကောင်းတယ်။း)
Adora etc. said on February 5, 2015 at 2:28 PM
မဇွန် ရေးပြီးပြီနော်။ အရမ်းကြာသွားတာ တော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတော့။ :D
ဇွန်မိုးစက် said on February 5, 2015 at 4:51 PM
လာပြီ Adora :)